अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डबीच हवाई सेवा सुरु हुँदै, नयाँ व्यवस्था अनुसार १४ दिनको क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपर्ने
अष्ट्रेलिया । पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरस विस्तारै नियन्त्रणमा आउन थालेपछि जनजीवन सामान्य बनाउन सरकारले विभिन्न निर्णय गर्दै आइरहेको छ । उता न्युजिल्याण्डले कोरोना मुक्त देश घोषणा गरिसकेको छ । न्युजिल्याण्डमा एक जना पनि कोरोना संक्रमित रहेका छैनन् । तर, अष्ट्रेलियामा भने कोरोना नियन्त्रणमा आउन अझै समय लाग्ने बताइएको छ । विस्तृतमा
चीनले अष्ट्रेलियालाई यति धेरै दबाब किन दिइरहेको छ ?
अष्ट्रलियाको एक लउण्ड्रीमा काम गर्ने १०० जनाभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी गुमाए
अष्ट्रेलियामा अमेरिकी कम्पनीद्वारा कोरोनाभाइरसको खोप परीक्षण
चीनमा प्रकाशित एउटा कार्टुनका कारण अष्ट्रेलियामा खैलाबैला
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरियामा आजदेखि स्कुलहरु सुचारु, जुन १ देखि २० जनासम्म भेला हुन पाउने
कोराना सङ्कटका बेला योगाभ्यास अति उपयोगीः अष्ट्रेलियन अनुसन्धानकर्ता
अष्ट्रेलियाबाट तीन जना नेपाली यसरी आइपुगे नयाँ दिल्ली
अष्ट्रेलियामा एकजना नेपाली पक्राउ, लाग्यो यस्तो घिनलाग्दो आरोप
काठमाडौँ । पछिल्लो समय विभिन्न अपराधमा नेपालीको संलग्नता देखिन थालेको थियो । तर, एक जना नेपाली भने १४ वर्षिय किशोरीलाई यौन प्रस्ताव राखेका कारण पक्राउ परेका छन् । सिड्नीबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
अष्ट्रेलियाको विनाशकारी डढेलोः झण्डै ५० अर्व जनावरहरु मारिए
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा लागेको डढेलोका कारण झण्डै ५० अर्व जनावरहरु मारिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय डढेलो झन् अनियन्त्रित भएपछि यसबारे गम्भिर हुन सरकारसँग अधिकारीले अपिल नै गरेका छन् ।
आउँलान् त अष्ट्रेलियनहरु नेपाल घुम्न ?
सिड्नी । जनवरी १ तारिखमा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नमा नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचारात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्थानीय फेडेरेसन स्क्वायरमा भेला भएर नेपालीहरुले भगवान गौतम बुद्ध, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र प्रकृति संस्कृतिको धनी देश नेपालको भ्रमण गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
अष्ट्रेलियामा डढेलो झनै अनियन्त्रित, संकटकालको घोषणा
सिड्नी । पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको डढेलोका कारण आम मानिसहरु त्रासमा रहेका छन् । डढेलो नियन्त्रण गर्न नसक्दा अष्ट्रेलियाले अर्बौँ क्षति भोगिसकेको छ ।
अष्ट्रेलियामा डढेलोको कारण ८ जनाको मृत्यु, १७ जना वेपत्ता, न्यु साउथ वेल्समा पुनः संकटकाल
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स (एनएसडब्लु) र विक्टोरिया राज्यमा लागेको डढेलोको कारण हालसम्म ८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तापक्रम बढेसँगै झाडीमा लागेको डढेलोले अझै उग्ररुप लिएपछि त्यहाँ स्थानीयहरु निकै प्रभावित भएका छन् । डढेलोकै कारण सयौं घरहरु जल्दा मानिसहरु घरबारबिहिन भएका छन् भने हजारौं जंगली जनावरहरु मारिएका छन् ।
नयाँ वर्षसँगै अष्ट्रेलियाको भिसा तथा स्थायी अनुमति नीतिमा कडाई हुने
सिड्नी । अंग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२० को सुरुवात भइसकेको छ । नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै अष्ट्रेलिया सरकारले आफ्नो बिभिन्न नीतिमा फेरबदल गरिरहन्छ । हरेक वर्ष भिसा नीतिमा फेरबदल गरेको अष्ट्रेलिया सरकार यसपटक पनि केही परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । सरकारले परिवर्तन गर्ने भिसा नीतिको कारण अष्ट्रेलिया आइपुग्ने लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भिसा नीतिकै कारण विद्यार्थीहरुको योजना समेत प्रभावित हुने गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स राज्यको डढेलोले बाबु र छोराको ज्यान गयो
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको न्यु साउथ वेल्स (एनएसडब्लु) राज्यको दक्षिणी तटमा भयानक डढेलो लागेको छ । उक्त डढेलोको कारण दुई जनाको ज्यान गएको छ । एकै परिवारका बाबु र छोराको डढेलोको कारण मृत्यु भएको हो ।
संसारकै उत्कृष्ट ‘सिड्नी हार्वर फायरवक्स’ हेर्न भिड
सिड्नी । अंग्रेजी नयां वर्ष सुरु हुन अब केवल केही घण्टामात्रै बाँकी छ । क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको बिदा बनाइरहेका अष्ट्रेलियाको सिड्नीवासीहरुको लागि आजको दिन अझै विशेष हुनेछ । कारण हो ‘सिड्नी हार्वर फायरवक्स’ ।
अष्ट्रेलियाको क्यानबेरा शहर नै किन नेपालीहरुको पहिलो रोजाइ रहेको छ ?
सिडनी । अष्ट्रेलिया आएका नेपालीको आकर्षण सङ्घीय राजधानी क्यानबेरा बन्न थालेको छ । स्थायी बसोबासका लागि सहज हुने भए पछि विभिन्न शहरमा रहेका नेपालीको यहाँ बसाइँसराइ क्रम बढ्दो रहेको छ ।
अष्ट्रेलियामा डढेलोको कहरः यो लोकप्रिय स्थानमा ४ हजार पर्यटक फसेँ
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको जंगलमा लागेको डढेलो समुन्द किनारमा रहेको लोकप्रिय शहर मल्लकुटासम्म पुगेको छ । उक्त किनारमा हजारौँ पर्यटकहरु रहेको बताइएको छ । स्थानीय अधिकारीहरुका अनुसार मल्लकुटा शहरमा चार हजारभन्दा बढी पर्यटकहरु फसेका छन् ।
काठमाडौं । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता– तुलसीको पातमा एन्टिअक्सिडेन्ट गुण पाइन्छ, जो हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोग गर्छ ।